Ifulethi elingaphambili elunxwemeni elinombono wolwandle
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguRosarioyEmma
Indawo entle esanda kulungiswa enembono yebhayi yaseJávea kunye neMontgo. Ifumaneka kumgangatho we-2 kunye ne-elevator kunye neendawo zokupaka, ikwimitha nje embalwa ukusuka elwandle, apho unokuva ukuntlitheka okumnandi kwamaza elunxwemeni. Iphelele kubathandi bolwandle kunye nokutya okulungileyo. Kwakhona ilungele iintsana kunye nabantwana njengoko ixhotyiswe ngebhafu, ibhedi, isitulo esiphezulu kunye ne-minipimer.
Ikufuphi nazo zonke iinkonzo, iindawo zokutyela kunye nemivalo yolwandle, kunye nokuhamba okumnandi ukuya kulwandle lwaseArenal kunye nezibuko.
I-Terrace enemibono yolwandle, apho unokufunda khona incwadi okanye ubukele nje ulwandle
Kukho ii-capsules ze-Nespresso kwigumbi lokuhlala ukuze ukonwabele ikofu elungileyo. Kuya kubakho neti kubathandi beti. Kodwa ukuba ufuna ukonwabela isidlo sakusasa esilungileyo, kufutshane nefulethi kukho iindawo ezininzi ngaphakathi kohambo lomzuzu omnye. Ukujika ngasekunene kukho iibhari ezininzi kunye neeresityu phakathi kwazo kukho iCocktail Bar ye "La Sal", ngelixa ngaphambili elunxwemeni kukho "Veleta" ibha yolwandle (ehlotyeni kuphela). Ngemizuzu nje emi-3 yokuhamba, unokufumana iLa Siesta, eyona chiringuito idumileyo eJavea
Unikezelo lwe-gastronomic e-Jávea yeyazo zonke iipalates kunye nalo lonke uhlahlo lwabiwo-mali. Ndikuxelela intandokazi yam, kodwa lumka, zininzi iindawo ezilungileyo.
Kwizibuko: Sotavent, Cala Bandida, The Beach House (isidlo sakusasa esikhulu) eNau-nau, kwiklabhu ye-yatch iJávea okanye iRani Palace (i-Indian kubo bonke ubomi e-Jávea)
Kufuphi nendlu: La Siesta, Saona okanye AmarreTapas.
Kwindawo yolwandle yaseArenal: Chabadabada, Aqua, Bambula okanye Vidafina. Kwakhona kuloo ndawo unayo iTula, eneenkwenkwezi zaseMichelin (kwaye ayibizi kakhulu)
Kwidolophu esezantsi: Chola, Trinquete, La Rebotica ... Ungaphoswa yibar yemarike epheka into oyithengayo kusasa.
Kubomi basebusuku, i-El Arenal okanye iMontgo di Bongo
E-Jávea kukho izigidi zemisebenzi ekufuneka yenziwe, yabathandi bolwandle, ukukhwela intaba, ukukhwela ibhayisekile, okanye imidlalo yasemanzini.
Khumbula ukuba indlu ijonge elwandle. Ukuwela nje indlela ukuya kuqubha okuhlaziyayo kula manzi ekristale.
Izibuko laseJavea limalunga nemizuzu eli-15 yokuhamba. Uhambo kwizikhephe zabucala kunye nohambo lokuntywila luququzelelwa apho. (Ngoku ibhulorho yokufikelela kwizibuko iphantsi kohlengahlengiso, ngoko ke kuya kufuneka uthathe umjikelo omncinci... ngethemba lokuba baya kuwulungisa kungekudala)
Rhoqo emva kwemini, ukusuka ngoMvulo ukuya ngoLwesihlanu, kwizibuko laseJave uya kufumana “imarike yeentlanzi”, apho intlanzi esandul’ ukubanjiswa ithengiswa kubalobi baselwandle.
Kwakhona, malunga nohambo lwemizuzu eli-10, uyakufika kunxweme lwaseArenal. Ulwandle olukhulu olunesanti olulungele ukuhamba nabantwana apho ungaziqhelanisa khona nezinto ezininzi, ezinje ngejet skis, kayaking, paddlesurfing, njl.
Ukudlula i-Arenal, nokuqhubeka emazantsi malunga ne-15-minute yokuhamba (okanye nge-2-minute ngemoto), kukho iCala Blanca, i-cove yamatye enamanzi acwengekileyo.
Kwabo banemoto kukho nolunye ulwandle olufanele ukutyelelwa njenge "La Granadella", "El Portichol", "Ambolo", njl.
Ukuba ufuna ukutyelela iLa Granadella, khumbula ukuba ukusukela ngehlobo lika-2019 awukwazi ukufikelela elunxwemeni ngemoto, kodwa kukho iibhasi zasimahla ukusuka kwindawo yokupaka ekungeneni kwendlela eya elunxwemeni.
Kubathandi bokuhamba intaba, unokunyuka iMontgo edumileyo, uye kwi-lighthouse yaseKapa San Antonio okanye ufike kwindawo yokujonga i-"Cap Negre", eyona ndawo ikufutshane ye-Iberian Peninsula ukuya kwiiBalearic Islands (Formentera). Ngeentsuku ezicacileyo unokubona iintaba zase-Ibiza
Umbuki zindwendwe ngu- RosarioyEmma
Inombolo yomthetho: VT-482323-A
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Bahía de Jávea